Yuusuf Garaad oo qoray faallo uu cinwaan uga dhigay: Soomaali Siman, haddana kala Mudan | Caasimada Online
Home Maqaalo Yuusuf Garaad oo qoray faallo uu cinwaan uga dhigay: Soomaali Siman, haddana...
Yuusuf Garaad oo qoray faallo uu cinwaan uga dhigay: Soomaali Siman, haddana kala Mudan
Haddii la gacan bidixeeyo, waxay dhibcaha u sii kordhineysaa kuwa u ololeeya gooni isu taaggu in ay u quus gooyaan qofkii innaba rajo ka qabi lahaa midnimo.
Waa dad iyaga oo heli kara sida ay Soomaali badani sameysay in ay degaannadooda oo nabad ah ay ku noolaadaan, ka door biday in ay ka shaqeeyaan ama ay astaan u ahaadaan midnimada. Kuwaas oo qaarkood ay ku nool yihiin Hoteello. Qaarna ay naftooda ku waayeen. Kuna darso, ma ahan dad sugaya ama u diyaar ah in xilal loo magacaabo. Qaarkood nooc ay tahayba hore ayay u soo arkeen iyada oo tan maanta ka aqood iyo sharaf badan.
Waxayna taasi heer Baarlamaan gaarsiin doontaa, kala duwanaan keeni karta kala mudnaan Koofur iyo Woqooyi. Taas oo ah waxa ugu muhiimsan ee ay doonayaan walaalaha Somaliland ee qiilka u doonaya in ay reer woqooyi oo wadajira ay u caddeeyaan in gooni isu taaggu uu uga badiyo midnimada.